Popayán को सांस्कृतिक र वास्तुकलाको परम्परा Absolut यात्रा
पोपायनको सांस्कृतिक र वास्तुपरम्परा
मारुउजेन | | कोलम्बिया
ल्याटिन अमेरिकासँग अद्भुत गन्तव्यहरू छन् र कोलम्बिया केहि उत्तम केन्द्रित। उदाहरण को लागी, पोपेन, औपनिवेशिक अमेरिकाको सब भन्दा पुरानो र सबै भन्दा राम्रो संरक्षित शहरहरू मध्ये एक। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण वास्तु र सांस्कृतिक विरासत छ।
पोपायनको ऐतिहासिक मामलाले तपाईंलाई चकित पार्छ, तर यो उत्कृष्ट, विविध र स्वादिष्ट खाना सहितको शहर पनि हो, त्यसैले हामी भन्न सक्दछौं कि एक पटक तपाईंले भ्रमण गर्नुभयो, यसले तपाईंलाई उत्तम सम्झनाहरू छोड्नेछ। आज, Absolut Viajes, मा समृद्ध सांस्कृतिक र संरचनात्मक परम्परा Popay Popn ...
2 पोपेन, सेतो शहर
3 पोपायनबाट गेटवे
यो कोलम्बियाई शहर यो काकाको विभागमा छ, पश्चिमी र मध्य Cordillera बीच, देश को पश्चिम मा। एक हो धेरै भूकंपीय क्षेत्र र शहरले धेरै भूकम्पहरू भोगेको छ त्यसैले यसको महान भवन विरासतमा स्थायी संरक्षण कार्य भइरहेको छ।
काका नदीले यसलाई पार गर्यो र रमाईलो गर्दछ सन्तुलित जलवायु यद्यपि, आज, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विश्वका अन्य भागहरू जस्तै यसमा सामयिक गर्मीका दिनहरू हुन्छन्।
पपायनको इतिहास उपनिवेशबाट शुरू हुँदैन, हो। छ prehispanic ईतिहास उसले के बित्छ पिरामिडल निर्माणहरू, सडकहरू र चिहानहरू। स्पेनिशले जनवरी १ 1537 मा पोपेन स्थापना गरे, एल डोराडोको खोजीमा। यो एडेलेन्टो बेलालजारले गरेको थियो, उही हो जसले क्विटो र स्यान्टियागो डे कालीलाई सम्पत्तीको खोजीमा स्थापना गर्‍यो।
त्यसदेखि त्यस शहरमा यसको आदिवासी नाम राख्ने बित्तिकै औपनिवेशिक शहरमा रूपान्तरण हुनेछ जुन स्पेनी प्रशासनिक मापदण्डहरू पछ्याउँदछ। योसँग त्यसपछि बेलीफहरू, काउन्सिलहरू, मेयरहरू, एउटा चर्च थियो ...
यद्यपि स्पेनिशले यी देशहरूमा बिउ र गाईवस्तु ल्याउने छ, सत्य यो हो कि चाँडै सबै कुरा चारैतिर घुमाइन्थ्यो oro र यसको शोषण। यसैले, पोपायन एक बने सबैभन्दा नयाँ र नयाँ ग्रेनाडाको विकिरोयल्टीको सबैभन्दा धनी शहरहरू। सुन र दास व्यापार शहरको धनको लागि साँचो थियो।
एक बिन्दुमा, पोपायनले अन्य महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहरहरू जस्तै कार्टाजेना वा बोगोटासँग प्रतिस्पर्धा गरे। स्थानीय परिवारहरूको सम्पत्तीले वास्तविक हवेलीहरू निर्माण भयो र सबै प्रकारको धार्मिक कलामा लगानी पनि गर्‍यो। यी सबै आजको सांस्कृतिक र वास्तुकला खजाना बनाउँछ।
पोपेन, सेतो शहर
यो कसरी यो जानिन्छ, पोपेन, सेतो शहर। सत्य यो हो कि यसले समय, राजनीतिक उथलपुथल र भूकम्पको बावजुद यसको धेरै पुराना भवनहरूको मर्मत गर्न प्रबन्ध गरेको छ। उसको ऐतिहासिक हेलमेट यो सुन्दर छ: यसमा मन्टर हाउसहरू, कब्बल सडकहरू, फूलहरूको आँगनहरू, शान्त मन्दिरहरू र सबै कुरा छ एक हिउँ सेतो रंगे यसले प्राय: यसलाई शुद्ध बनाउँछ। अमेरिकी औपनिवेशिक शैली को एक महान उदाहरण।
पोपेन यो काली बाट तीन घण्टा मात्र छ कार द्वारा जाँदै र यसैले एक सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य हो। सर्वप्रथम पहिलो चीज: यसको ऐतिहासिक केन्द्र, खुट्टामा अन्वेषणको लागि आदर्श यस तरीकाले तपाईं सुन्दरको मूल्यांकन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ १th औं, १ XNUMX औं र १ th शताब्दीका वास्तुकला। यहाँ छ पार्क Caldasशहरको मुटु जुनसुकै देखि बढयो। यो यसको वरपर छ जुन सुन्दर औपनिवेशिक भवनहरू छन् ...
१ XNUMX औं शताब्दी देखि सुन्दर छ घडी टावर, "पोपेनको नाक" को रूपमा पनि चिनिन्छ। घडी पीतलबाट बनेको छ र यो लण्डनबाट विशेष रूपमा ल्याइएको एउटा टुक्रा हो। त्यहाँ पनि छ Humilladero ब्रिजजहाँबाट शहरको दृश्य महान छ, जुन एकै साथ उत्तरी उपनगरहरुमा केन्द्र जोड्दछ। यो २240० मिटर लामो छ र सहरको मूल प्रवेश स्थानमा चिन्ह लगाउँछ।
यो १ th औं शताब्दीको बीचमा निर्माण गरिएको थियो र आज यो एक आइकन हो, मुख्य वर्गबाट ​​केवल केही कदम। यो अर्को छेउमा छ कस्टोडको पुल, पादरीहरूलाई मोलिनो पार गर्न अनुमति दिन १ to१1713 मा निर्माण गरिएको सुन्दर पत्थर पुल।
हिंड्दा तपाईं धेरै देख्नुहुनेछ क्याफे, पसल र रेस्टुरेन्ट र निस्सन्देह, धार्मिक मन्दिरहरू। को इग्लेसिया डे स्यान फ्रांसिस्को यो सबैभन्दा ठूलो औपनिवेशिक मन्दिर हो र यो वास्तवमै सुन्दर छ। तपाईं भवनको बारेमा बढि जान्नको लागि गाईडको साथ टुर गर्न सक्नुहुन्छ। १ 1983 XNUMX मा भएको भूकम्प पछि, अस्थिभंग्रेले तोड्यो र छ वटा लाशहरू लागायो। आज त्यहाँ दुई मात्र बाँकी छन् र ती जहिले पनि देख्न सकिँदैन, तर यात्राको साथ तपाईं भाग्यशाली हुन सक्नुहुन्छ। कुनाको वरिपरि अर्को चर्च छ र तपाईं अझ धेरै देख्नुहुनेछ।
उदाहरणका लागिशहरको सब भन्दा पुरानो गिर्जाघर १1546 from को हो र ला इर्मिटा भनेर चिनिन्छ। यो एल मोरो र शहरको बीचमा छ र यो सबैमा सब भन्दा सुन्दर छैन तर यसमा सुन्तला औपनिवेशिक छत र राम्रा पुराना फ्रेस्कहरू छन्।
अवश्य पनि, एक शताब्दी पुरानो शहरसँग संग्रहालयहरू छन्। को गुइलर्मो भ्यालेन्सिया संग्रहालय यो एक १ XNUMX औं शताब्दीको हवेलीमा संचालित छ र चित्रहरू, फर्निचर र पुराना फोटोग्राफहरू छन् जुन यसको मालिक, स्थानीय कविको हो।
अर्को संग्रहालय हो मस्केरा हाउस संग्रहालय१ XNUMX औं शताब्दीको हवेलीमा पनि १ th औं शताब्दीमा चार पटक कोलम्बियाका राष्ट्रपति जनरल टोमास सिप्रियानो डे मस्कराको घर भएको थियो। र तिनीहरू भन्छन् कि भित्तामा उसको मनको साथ कलश छ ...
El धार्मिक कलाको आर्किडियोसेसन संग्रहालय चित्रहरु, मूर्तिहरु, चांदीका सामानहरु, वेदाहरु, र मिश्रित धार्मिक कला, सबै १ XNUMX औं देखि १ th औं शताब्दी सम्मिलित सामिल छन्। त्यहाँ पनि छ प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा, कोलम्बिया मा यसको प्रकारको सबै भन्दा राम्रो संग्रहालय।
सत्य यो हो कि पोपेन हतार नगरी र एक हजार पजसहित पैदलमा अन्वेषण गर्ने शहर हो। तपाईंको चरणहरू तपाईंलाई यहाँबाट त्यहाँ लैजानेछ, म्यानहरू बीच, हजार फूलहरूको आँगनको बीच, सेतो फेकडेस र रेष्टुरेन्टहरू जहाँबाट अविश्वसनीय सुगन्ध देखा पर्दछ। यसैले, तपाई घुम्न जानुहुन्छ, शहरको पनोरमिक बिन्दुमा पुग्नुहुनेछ जहाँ यसका संस्थापक सेबस्टियन दे बेलकाजारको मूर्ति एकदमै पुरानो पिरामिडको शिखरमा राखिएको थियो, जुन त्यसकै मोरो डे टुलकन.
यदि तपाईंसँग घमाइलो र स्पष्ट दिन छ, तपाईं पपाइनको ओल्ड टाउन पछाडि पनि देख्न सक्नुहुनेछ र सुन्दर हिमालहरू जसले यसलाई अँगाल्दछन्। यहाँ चढाई सास र एक आधा लिन्छ, तर तपाईं यस ठाउँ बिन्दु माथि सबै माथि देखेको बिना छोड्न सक्नुहुन्न।
हामीले सुरूमा भनेझैं शहरले पनि प्रस्ताव दिन्छ कोलम्बिया मा एक राम्रो gastronomies को एक त्यसोभए तपाईं उनीहरूको भाँडाको प्रयोग बिना छोड्न सक्नुहुन्न। सबैभन्दा लोकप्रिय स्थानीय डिश हो ट्रे पैसा, चामल, फ्राइड अण्डा, सुनहरी सुँगुर, केरा र एभोकैडोको साथ। एक खुशी! र हो, क्लासिक्स arepas तिनीहरू पनि अभाव छैन।
खानको लागि राम्रो ठाउँ भनेको ला फ्रेस्का हो, एउटा सानो पसल जुन मुख्य वर्गबाट ​​केही मिटरमा छ र त्यो एक पुरानो र सबै भन्दा राम्रो परिचित हो। यो पहिलो नजर मा धेरै भन्न छैन, तर तिनीहरूको पाइपियन एम्पानेडिटस एक स्वादिष्ट चीज हुन् (मसलादार बदाम सॉसको साथ आलुले भरिएको)।
यदि तपाइँको इरादा पोप्यानमा एक दिन भन्दा बढि रहनु हो भने त्यहाँ केहि भेटहरू छन् जुन तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ पुग्न सक्नुहुन्छ सान अगस्टन र यसको प्रि-कोलम्बियाई साइट थाहा छ जुन द्वारा सुरक्षित छ युनेस्को।
त्यहाँ पनि छ पुरस नेशनल पार्क, क्षेत्र मा सबै भन्दा ठूलो। योसँग एक ज्वालामुखी छ जहिलेसम्म हिउँ परेको शीर्ष, यसले पार्कलाई यसको नाम दिन्छ, र यदि तपाईंलाई पर्वतारोहण वा पर्वतारोहण मन पर्छ भने यो उत्तम गन्तव्य हो। अन्यथा, तपाईं एक अप्रशोधित सडकमा बसबाट माथि जान सक्नुहुन्छ तर उत्कृष्ट दृश्यहरूको आनन्द लिनुहोस्, तातो स्प्रि ,हरू, धुंध र झरनाहरूको साथ। र भाग्यको साथ, तपाईं एन्डिसको कन्डोर देख्नुहुनेछ।
पोपायनबाट एक घण्टा हो सिल्भिया, एक सानो पहाडी शहर धेरै प्रसिद्ध किनभने हरेक हप्ता त्यहाँ छ स्वदेशी बजार। भेटघाट मंगलबार हो। त्यो दिन गुआम्बियानो गाउँहरू बाट आउँछन् र उत्पादन बेच्न र किन्नको वरिपरिको भण्डार गर्दछ। तपाईं पनि उही गाउँहरूमा सानो जीप यात्राको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई चिन्न वा फार्ममा खाजा खानको लागि।
के तपाई तातो स्प्रि ?्ग्स मन पराउनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं जान सक्नुहुन्छ कोकोनोको थर्मल बाथहरू, Popayán बाट एक कदम टाढा। योसँग दुई फरक पोखरीहरू छन्, उमालेको पानी र न्यानो पानी, र यदि तपाईं प्यरेस चढ्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको शरीर र दिमागका लागि उत्तम अन्त हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » पोपायनको सांस्कृतिक र वास्तुपरम्परा
फेबियन लारा ओñआ भन्यो
सुन्दर वास्तुकला जसको लेखकत्व लगभग सबै इक्वेडरमा हुनुपर्दछ, यस लेखकका लेखकहरू त्यस समयका आर्किटेक्टहरू र निर्माणकर्ताहरूसँग सम्बद्ध गर्न, शैली (बारोक?) वा शैलीको विभिन्न प्रकारका स्पष्ट ढ establish्गले स्थापना गर्न राम्रो हुन्छ। पृष्ठ जे भए पनि मेरो अभिवादन र बधाई हो।
फेबियन लारा ओबालाई जवाफ दिनुहोस्
पानामानियन डोरिस भन्यो
शुभ प्रभात, पोपायन शहर कति सुन्दर छ, म श्री यिमी गोंजालेज, वा श्रीमती लुज डारी वा श्री अल्फोन्सोलाई खोज्दै छु। उनी श्री यिमीको धर्मपुत्री अभिभावक हुन् र उनकी आमा डोलोरेसको तर्फबाट बुआनाभेंटुरा शहरबाट। मदिना कृपया निम्न फोनहरूमा संवाद गर्नुहोस् 316१3299895-314 8498161 310 3279514 or वा XNUMX१XNUMX-XNUMX XNUMX XNUMX१XNUMX१ वा XNUMX१०-XNUMX XNUMX १XNUMX you धेरै धेरै धन्यवाद।
डोरिस पानामानियनलाई जवाफ दिनुहोस्
सिसिलीमा किनमेल गर्दै